Qarax bambaano oo ka dhacay meel u dhow waqooyiga magaalada Baghdad ayaa dilay ugu yaraan 30 qof. - Axadle
Qof isa soo miidaamiyay ayaa dilay ugu yaraan 28 qof ugu yaraan 73 kalena dhaawacay goob ganacsi oo mashquul badan oo ku taal bartamaha Baqdaad maalintii khamiista, militariga ayaa sheegay.
General Hazem al-Azzawi, oo ah agaasimaha howlgalada Baqdaad, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Ciraaq (INA) in “laba qarax” ay haleeleen suuq ay dad badani ku sugnaayeen oo ku yaal agagaarka Bab al-Sharji agagaarka Fagaaraha Tayaran.
Ilo wareedyo caafimaad ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ay ka cabsi qabaan in tirada dhimashadu ay sii kororto. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay dhaqaatiir ka howlgalisay guud ahaan caasimada si ay uga jawaabaan weerarka dhimashada badan dhaliyay.
Afhayeenka militariga Yahya Rasool ayaa sheegay in labo qof ay is qarxiyeen iyagoo eryanayay ciidamada amaanka.
Weriye ka tirsan AFP oo goobta ku sugan ayaa sheegay in bambooyinku ku qarxeen suuq dharka lagu iibiyo oo ku yaal Fagaaraha Tayaran.
Kadib sanado rabshado ah, duulaankii Mareykanka ee 2003, qaraxyada ismiidaaminta ah aad ugama badna caasimada. Weerarkii ugu dambeeyay ee noocan oo kale ah wuxuu dhacay bishii Juun 2019 waxaana ku dhintay dhowr qof.
Mintidiinta waxay si joogto ah u bartilmaameedsadaan saldhigyada Mareykanka gantaallo iyo hoobiyeyaal, gaar ahaan safaaradda Mareykanka ee aagga Cagaaran ee aadka loo ilaaliyo. Xawaaraha weerarada ayaa gaabis ah tan iyo markii xabad joojinta aan rasmiga aheyn ay ku dhawaaqeen kooxaha hubeysan ee ay taageerto Iran.
Ma jirto koox isla markiiba sheegatay mas’uuliyadda weerarka, laakiin qaraxyada ismiidaaminta ah waxaa inta badan fuliya ISIL (ISIS).
Ciraaq ayaa ku dhawaaqday in ISIL laga adkaaday dhammaadkii 2017 ka dib olole xoog leh oo socday saddex sano. Laakiin cutubyada jiifka ee kooxdu waxay sii wadeen inay ka hawlgalaan dhulka lamadegaanka iyo buuraleyda ah, iyagoo si caadi ah u bartilmaameedsanaya xoogagga amniga ee gobolka ama kaabayaasha dhaqaalaha iyo weerarrada kale ee yaryar.